How'd it happen and more reports?: မဲပေးချင်လွန်းလို့ ၃:၃၀နာရီကျော်ျချွးတစွဲစွဲစောင့်ပြီး မဲပေးနေကျတဲ့ စံပြ စကာင်္ပူကရွှေတွေ?
မဲပေးချင်လွန်းလို့ ၃:၃၀နာရီကျော်ျချွးတစွဲစွဲစောင့်ပြီး မဲပေးနေကျတဲ့ စံပြ စကာင်္ပူကရွှေတွေ?
😱ဘုရားရေ…ကြည့်စမ်းပါအုန်း မဲပေးဖို့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက တန်းစီနေကျလဲမသိဘူး ဘတ်စ်မှတ်တိုင်ကိုကျော်နေပြီ ၊ များလိုက်တဲ့ရွှေတွေ… 😘
ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ခံစားနေရလဲ ဆိုတာသိတာလွန်းတယ်နော်…
😍တကယ်စံပြချီးကျူးဖို့ကောင်းတာကစကာင်္ကရွှေတချို့က တနေကုန် ရေ ၊အစားအသောက်တွေ ဝေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျ…
နောက်ပြီး အံ့သြစရာကောင်းတာက အမှိုက်ထည့်ဖို့ အိပ်ကလေးတွေလဲ သံပန်းတွေမှာချိတ်ထားပေးပြီး ကောင်လေးတယောက်တောင်က အမှိုက်လိုက်သိမ်းပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်😘
အနည်းဆုံး ၄နာရီလောက်ကြာတယ်ဗျ! မနက် ၁၀နာရီကနေ အခု ၁:၃၀နာရီမှာပြီးပါတယ်…ချွေးတေကတော့ အင်္ကျီတခုလုံးရွဲနေတာဘဲ…
ဂိတ်ဝမှာ မိမိ ပတ်ပို့ ပြပြီး မိတ္တူလဲရပါတယ်၊ မေးတာက မဲစာရင်းပါလားလို့မေးပါတယ် ပြီးတော့ ဘယ်တိုင်း ဘယ်မြို့နယ်မေးပြီး ဘယ်ကောင်ကိုသွားပြောပါတယ်…မဲစာရင်းပါသူဘဲ အထဲကိုပေးဝင်ပါတယ်…(မဲစာရင်းမပါတဲ့သူတွေဝင်လို့မရပါဘူး)…
အိတ်တွေကိုတော့ စကာင်္ပူရဲကစစ်ဆေးပါတယ် (ဖုန်းယူလို့ရပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ ဓာတ်ပုံကို အထဲမှာ ရိုက်ခွင့်ပိတ်ထားပါ၊ အစားအသောက် တွေ ပေးမစာ၊ဆေးလိပ်ပေးမသောက်ပါဘူး)
အထဲရောက်တော့ ကံကောင်းချင်တော့မိမိကောင်တာက လူခေါ်တာ မိမိတယောက်ထဲရှိတော့ အားနာစရကောင်းတယ် လူအများကြီးကြားထဲက မိမိကောင်တာဆီသွားပြီး မိမိရဲ့မြို့နယ်အလိုက်ကို မိမိကြည့်ထားတဲ့ သံရုံးမဲစာရင်းနံပါတ်တွေကို ပြောလိုက်တော့ အမြန်ရှာတွေတယ်လေ၊ ဒါကြောင့် ကောင်တာကလူတွေလဲမဲလက်မှတ် ၃ခု ထုတ်ပေးပါတယ်… မဲရုံးမှုးလက်မှတ်ကို ကိုယ်ရှေ့မှာဘဲ တခါထည်းထိုးပေးပါတယ်…
(ဒီမှာ တချက်သတိပေးပါရစေ မိမိကြည်ထားတဲ့ သံရုံးကမိမိမဲနံပတ်ကို အလွယ်တကူ ရှာရလွယ်အောင်ပြောပါ၊ မိမိကောင်တာမှာ တွေ့တာ ကောင်လေးတယောက် မိမိအမည်ကိုရှာနေတာ မဲစာအုပ်ကုန်ပြီ ရှာလို့ မတွေသေးဘူး၊ နောက်က လူတွေ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျ၊ နို့မဟုတ်ရင် မဲ ၂ခု ၁ခု ရတာ ရှာရတာကြာလို့ ရစ်တာဘဲဖြစ်မယ်ဗျ… နောက်မှာ လူတွေ အများကြီးတန်းစီနေကျတာ မိမိကြောင့် သူ့တပါးကို ဒုက္ခ မပေးပါနှင့် … တာဝန်ရှိသူတွေလဲ အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ ပြဿနာတွေကတော့ ရှိတာပေါ့ အားလုံး ဘယ်အဆင်ချေနိုင်ပါမလဲ?) သီးခံပါ…
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ပြည်သူလွှတ်တော်နှင့်တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုပြီး မဲ၃ခုကို သူနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်တာမဲ ၃မဲကို မဲရုံ အမှတ် ? တွေနှင့် ထုတ်ပေးပြီး မိမိပေးခြင်တဲ့ ပါတီကို အမှန် အမှတ်ခြစ်ရတာပါ… တံဆိပ်တုန်းမထုရပါဘူး ဘောပင်နှင့် အမှန်ခြစ်ရတာပါ၊
(သတိထားရမှာက မဲရုံမှုးလက်မှတ်တွေကိုစစ်ဆေးပြီမှာ ယူပါလို့ သတိပေးပါရစေ…တချို့နယ်က လူတွေကို မဲလက်မှတ်၂ခုတို့၊ ပိုဆိုးတာက အဖွားကြီးတယောက်ကို ၁ခုဘဲပေးတယ်လို့ သတင်းကြားတယ်နော်၊ အမှန်၃ခု ပေးရမှာပါ… ရုပ်ကြည့်ပြီးလုပ်စားတာလားတော့မသိဘူးနော်!)
ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်စာအိပ်တွေမှာ ထည့်ပြီးကော်နှင့်အသေချာပ်ိတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမဲပုံးတွေမှာ မဲထည့်ရတာပါတယ်…
ဒီနေ့မဲလာပေးသူတွေ ၁၈၇၇ ယောက်ရှိတယ်လို့ channel new Asia သတင်းဌာန ပြောတယ်!.
ဒီအတိုင်းဆိုရင် ၄ရက်နှင့်ဘယ်လိုမှ လူအကုန် ပေးလို့အချိန်လောက်ထင်တယ်!
Posted by Ko Nge at Friday, October 16, 2015